Global ကွန်ပျူတာသင်တန်း: အခြေခံဓါတ်ပုံပြင်နည်း
တကယ်လို့သင်ဟာ ကွန်ပျူတာထဲရှိ ဓါတ်ပုံများနှင့်ပါတ်သတ်ပြီး တခါမပြုပြင်ဖူးသော် ဓါတ်ပုံပြင်ခြင်းဟာ ခက်ခဲကောင်း ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ Adobe Photoshop နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး Window နှင့် Mac အတွက်ပါ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ Adobe Photoshop ဟာ အထူးသဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော Program တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ၄င်းအားအသုံးပြုပြီးတော့ ဓါတ်ပုံလုပ်ငန်းများနှင့် ပါတ်သတ်သော သူများ ၊ ဒီဇိုင်နာများ က အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ Photoshop ကို ဓါတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့် ပါတ်သက်သော လုပ်ငန်းအားလုံးနီးပါးတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်၊ ဥပမာ။ ဓါတ်ပုံပြုပြင်ခြင်း၊ အရည်အသွေးမြင့် ပုံရိပ်ဖန်တီးခြင်း၊ အခြားသော... ပုံရိပ်များနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
In fact, Photoshop has so many features that it may actually be too powerful for many users. It's also very expensive, so unless you need to edit photos or graphics professionally, Photoshop may not be the best option for you. You may want to review our lesson on Photoshop Alternatives to learn about some other image editing programs you can choose from.
ဒီကိစ္စနဲ့ပါတ်သတ်ပြီးတော့ Photoshop တွင် များစွာသော အသုံးပြုသူများအတွက် အလွန်အမင်း အသုံးတည့်သည် စွမ်းအားပြည့် စနစ်များ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ဈေးကြီးပေးဝယ်ယူရပါတယ်။ ဓါတ်ပုံပြုပြင်သူများနှင့် သက်ဆိုင်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသူများအနေနှင့် အလဟသမဖြစ်စေပါ။ Photoshop က သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်ခွင့်ကို ရရှိမှုမဖြစ်သည့်တိုင်။ ဒီသင်ခန်းစာများကို လေ့လာ ဖတ်ရှုသွားမည်ဆိုပါက များစွာသော ဓါတ်ပုံပြုပြင်နိုင်သော Program များထဲမှ ဒီ Photoshop ပရိုဂရမ်ကို ရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့သည်မဟုတ်ပါလား။
Because Photoshop is primarily designed for professionals, it can be somewhat challenging to use, especially if you're learning it for the first time. That said, you don't need to understand all of Photoshop's features to use it effectively. Throughout this tutorial, we'll help you understand the most basic and essential Photoshop skills. We'll also provide links to other tutorials if you want to learn more about advanced tools and techniques.
We'll be using Photoshop CC throughout this tutorial to show you Photoshop's features. If you're using an older version of Photoshop—like Photoshop CS5 or earlier—some features may workabit differently, but you should still be able to follow along. However, if you're using Photoshop Elements, it's important to note that some of the features we'll discuss may be missing or work inadifferent way. We'll talk more about Photoshop Elements in the next lesson.
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Photoshop ဟာ Professional ကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားလို့ပါ။ ၄င်းက ဘာတွေကို ပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့ စိန်ခေါ်ထားပါသလဲ။ အထူးသဖြင့်ပေါ့ ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံသစ် လေ့လာသူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလျှင် သူကပြောပါလိမ့်မယ် Photoshop ထဲမှာ ပါဝင်နေတဲ့ စနစ်တွေအားလုံးနဲ့ ကျွမ်းဝင်နေဖို့ မလိုအပ်ပါဘူးလို့။ ဒီသင်ခန်းစာတွေကို သာ ပုံမှန်လေ့လာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်။ Photoshop နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီးတော့ အရေးပါသော အခြေခံကျသော အကြောင်းအရာများကို သဘောပေါက်နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်။ Photoshop CC ဆက်လက်လေ့လာသွားခြင်းအားဖြင့် နောက်ထပ်သော သင်ခန်းစာအသစ်များကိုလည်း ထောက်ပံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်လို့ Version အဟောင်းအသုံးပြုသူဖြစ်ခဲ့ပါသော်လည်း တချို့လုပ်ဆောင်ချက်ကိုဆောင်ရွက်ရာမှာ အနည်းငယ်ကွာဟမှုမျိုးရှိနိုပါတယ် ဒါပေမယ့် ဆက်လက်ပြီးတော့သာ လေ့လာသွားပါ Photoshop နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး နားလည်သဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။ မှတ်စုပေးချင်တာကတော့ လေ့လာအချင်းချင်း ဆွေးနွေးကြပါ၊ အလုပ်နဲ့ပါတ်သက်ပြီး အမှားအယွင်းနည်းသွားအောင်၊ မတူညီသော နည်းလမ်းများဖြင့် လေ့လာသွားပါ၊ ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ သင်ခန်းစာများကို ဆက်လက်လေ့လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။
Posted by Zayyar Ting at 3:51 AM